မြန်မာနိုင်ငံ ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိိ သာသနာတော်ကြီးမှဆုံးရှုံးခဲ့ရသော(ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြကုန်သော) ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိိ သာသနာ့ဝန်ဆောင် သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များ စာရင်း <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
၂၀၂၁ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်လ ကာလတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိ သာသနာတော်ကြီးမှဆုံးရှုံးခဲ့ရသော(ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားကြကုန်သော) ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိ သာသနာ့ဝန်ဆောင် သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များ စာရင်း
လက်ရှိိ ပြုစုခဲ့ပြီးသော စာရင်း အရ စုစုပေါင်း ၃၆၀ ကျော်
ပိဋကတ် ၂ ပုံအောင် ၂ ပါး
ပိဋကတ် ၁ ပုံအောင် ၁ ပါး
အ-ဘိဝံသ ၁၀ ပါး
နှင့် တခြားသော ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန ဆရာတော်များ၊ ပညာတတ် ဆရာတော်ကြီး များ၊ ဝိဇ္ဇာ ဆရာတော်ကြီးများ စွာ ပါဝင်သည် ကို ဝမ်းနည်းစွာ တွေ့မြင်ရပါသည်။
(မှတ်ချက်။ စာရင်းပြုစု၍ မပြီးသေးပါ၊ တော်တော်များများ ကျန်ပါသေးသည်။
ဤ စာရင်းကို မိမိတို့ နီးစပ်ရာတွင် ပြန်လည် share လုပ်ခြင်းဖြင့် အများသိအောင် မျှဝေနိုင်ကြပါသည်။
ယ္ခု စာရင်းများသည် facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် တွေ့သော နာရေးများကိုသာ ရနိုင်သမျှ စုဆောင်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တချို့သော နာရေးများသည် facebook လိုင်းပေါ်သို့ ရောက်မလာဘဲ စာရင်းပျောက်နေသည်များလည်း အများကြီး ကျန်ရှိနေနိုင်ပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် မိမိတို့နီးစပ်ရာ ဆရာတော်များ၊ သီလရှင်များ နာရေးကိုလည်း အောက်ဖေါ်ပြပါ FORM တွင် ပြည်ထောင်စုယူနီကုတ်ဖောင့် ဖြင့် ဝင်ရောက် ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
သတင်းအချက်များကို မှန်ကန်တိကျစွာ ရယူပြီးမှသာ ဖြည့်စွက်ပါရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
သံဃာများသည် နာမည်တူတွေ အရမ်းများပါသည်။ လူနာမည်တွေဆိုလျှင် အဖေနာမည်နဲ့ ခွဲရသလို သံဃာတွေအတွက် သီတင်းသုံးသည့် ကျောင်းနာမည်ဖြင့် ခွဲရပါသည်။ ကျောင်းနာမည်တွေကလဲ တူနေတာတွေအရမ်းများသည့်အတွက် ကျောင်းလိပ်စာနဲ့ ပြန်ခွဲရပါသည်။ ကျောင်းလိပ်စာတွင် ရွာနာမည် တခုလောက်နဲ့လည်း မလုံလောက်သေးပါ။ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးမှာ နာမည်တွေ တူနေတဲ့ ရွာတွေ၊ မြို့တွေ အများကြီး ဖြစ်နေတ်သဖြင့် ကျောင်းလိပ်စာကို တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နည်တွေနဲ့ ပြန်ခွဲထုတ်ရပါသည်။
များသောအားဖြင့် ဆရာတော်တွေ ဘဝတသက်တာ ကြိုးစားထားခဲ့ရတဲ့ စာမေးပွဲအောင်ဘွဲ့တွေကို အပြည့်အစုံ မထဲ့တတ်ကြပါ။ တခါတလေ ဘွဲ့တေွက များလို့ ထိုအများကြီးထဲမှ အကြီးဆုံးဟု ယူဆရတဲ့ ဘွဲ့ တခုလောက်ကိုသာ ထဲ့တတ်ကြပါသည်။ အမှန်တော့ ဘွဲတခုလောက်ဖြုတ်လိုက်ရင် အဲဒီဆရာတော်ရဲ့ ၄နှစ် ၅ နှစ်စာလောက် ကြိုးစားထားတာ နစ်နာသွားပါတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပျံတော်မူ ဆရာတော်များကို နောက်ဆုံး ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ စာမေးပွဲဖြေလို့ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံတော်က ဂုဏ်ပြု ဆပ်ကပ်ခံရတဲ့ ဘွဲ့တွေ အပြည့်အစုံ မှတ်တမ်းတင်ထားချင်ပါသည်။ ရသမျှ ကြိုးစား ဖြည့်စွက်ပေးကြပါရန်။
မိမိတို့သိသော facebook မှ သံဃာတော် နာရေး post များကိုလဲ ဤ ဖေါ်ပြပါ facebook account သို့ messenger မှ တဆင့် ink များ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဖေါ်ပြထား နာရေး စာရင်များထဲမှ ဖြည့်စွက်လိုသော၊ ပြင်ဆင်လိုသော အကြာင်းအရာများရှိပါက dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ပို့၍ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ ဓမ္မိကာတောရစာသင်တိုက်နှင့် မြကင်းတောင်အေးရိပ်ငြိမ်တောရ၏ဦးစီးပဓါနဆရာတော် သာသနဓဇသိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တသာသန ၏ ဓါတ်တော်များ
တော် ပျံတော်မူသည့် နေ့ ရက်၊ အချိန် အောင်မြင်ထားသည့် ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးများ ကိုဗစ်ရောဂါ
၁ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကုန်းလော ကျေးရွာ၊ ကုန်းလောဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သံဃာတပါး
၃-၅-၂၀၂၁ နေ့တွင် လက်နက်ကြီး ကျောင်းဝန်းထဲသို့ ထိမှန် ပျံတော်မူ
၂ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက်မြို့ မန္တလေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ပဓာနနာယက ဆရာတော် အရှင်တိက္ခာစာရ
၅-၇-၂၀၂၁ နံနက်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၃ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မိုးမောက်မြို့ မန္တလေး ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ ဆရာတော်တပါး
၅-၇-၂၀၂၁ ရက် မနက်ပိုင်းတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူ
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဟိုပင်မြို့ ၊ အရှေ့ကျောင်းကြီးတိုက်ဦးစီးပဓာန နာယက၊ ပညာဘဏ်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကျောင်း တည်ထောင်သူ၊ ဆရာတော်ကြီး ဦးသီတလ
၃-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၂း၁၅ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနာ့ ဓဇ ဓမ္မာစရိယ မသိပါ
၅ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဟိုပင်မြို့ ၊ ငါးမိုင်ရွာ၊ ငါးမိုင်ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ အာစိဏ္ဏ 66 47
၅-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မာခရော်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထားလှဲကျေးရွာ၊ ထားလှဲ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သောဘန
၃-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဟိုပင်မြို့ တွင် ဝါဆိုစဉ် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၇ ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့၊တောင်သုံးလုံးဦးသာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းဆရာတော် ဥူးသုစိန္တာ 85 65
၂၂-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ဝိနယပိဋကမဟာဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့၊ မဏိရတနာမြို့မ ကမ်းနားကျောင်းဆရာတော်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်သံဃနာယကဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဒ္ဒန္တဇနိန္ဒ
၂၇-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက်ပိုင်း၌ ပျံလွန်တော်မူ
၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်၊ မဟာမင်းကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇဝန 58 38
၄-၇-၂၀၂၁ နံက်(၃)နာရီအချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၀ စစ်ကိုင်းမြို့မှ ဓမ္မမေတ္တာ ဆရာတော် ဦးဝိမလ
၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁နာရီတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်လှရွာ၊ ညောင်ပင်လှကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇေယျသေဋ္ဌ
၇-၇-၂၀၂၁ နံနက် (၁၀)နာရီ မိနစ်(၂၀) ခန့်က ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်သာ အုပ်စု၊ ပေါက်တောကျေးရွာ၊ သက်တော်ရာ စာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယက ဆရာတော်ကြီး
၁၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်တွင် မုံရွာ ဆေးရုံကြီး၌ အောက်စီဂျင်ပြတ်လတ်မှု့ကြောင့် ကိုဗစ်ရာဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာရပ်ကျေးရွာ၊ ကျောင်းမကျောင်းတိုက် ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနာရဒ
၁၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၄ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မစကူးလ်နာယက ဆည်ဝရွာကျောင်းဆရာတော် 60 41
၁၂-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ၅နာရီခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ မင်းစုရွာ ဇာတိ၊
University of Global Peace၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး တက္ကသိုလ် ရန်ကင်းတောင် မန္တလေး မှာ M.A အတန်းကို တက်နေဆဲသော၊ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ကို မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှ အောင်မြင်ခဲ့သော၊ အရှင်အဂ္ဂဉာဏ
၁၃-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ပျံလွန်တော်မူ
University of Global Peace၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး တက္ကသိုလ် ရန်ကင်းတောင် မန္တလေး မှာ M.A အတန်းကို တက်နေဆဲသော
ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ကို မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှ အောင်မြင်ခဲ့သော ဟုတ်ပါသည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ နဂါးတွင်းစံပြကျေးရွာ၊ ဘုံစံတိုက်သစ် (အလယ်ကျောင်း) ကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်ကြီးဖြစ်တော်မူသော ဆရာတော် ဥူးကောသိယ
၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ၆ နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ် အောင်ဇေယျာရပ်ကွက် သိုက်ကုန်းကျောင်းတိုက် မြို့နယ်သံဃာနာယက ဥက္ကဌဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကဝိန္ဒ
70 ၁၈-၀၇-၂၀၂၁ ခုနှစ် ညနေ (၃:၀၅)နာရီအချိန်တွင် ဆီးချိုရောဂါအခံ၊ ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်တော်မူ ဟုတ်ပါသည်
၁၈ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာ မြို့ ဇောတိကတိုက်မှ ဦးဇင်း ဦးတိက္ခ​ (မောင်ဝတုတ်) ၁၉-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်​တော်မူ ဟုတ်ပါသည်
၁၉ မုံရွာပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္ကေကောသလ္လ 55
၂၀-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မှု
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ ရတနာပုံရပ်ကွက်၊ ဓမ္မပါလရိပ်သာကျောင်းတိုက်မှ မှော်တော်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ မဏ္ဍလ
၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄.၄၅ မိနစ် အချိန်မှာ မူလက ကျောက်ကပ်ဆေးနေရပြီး ကိုဗစ်ရောဂါဝင်ကာ ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ ဂုဏ်ထူးကျမ်းအောင်လို့ သိရီပဝရဓမ္မာစရိယ ဟုတ်ပါသည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ သက္ကယ်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ မဟာမြိုင်တောရ အောင်သုခဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနိမ္မလ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ မြို့သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီးကုန်းရွာ၊ ကံကြီးကုန်းဓမ္မစကူးလ်ဦးဆောင်ဆရာတော်
၂၂-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၂၃ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာ၊ မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေ၊ မှ ဘဒ္ဒန္တသီလာစာရ ၂၃-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ ဓမ္မာစရိယ ဟုတ်ပါသည်
၂၄ အရှင်ဣန္ဒာစရိယ 30
၂၃-၇-၂၀၂၁ ခန့်က သွေးတိုးလေဖြတ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
သီတဂူ ဘီအေတန်း တက်ရောက်ပညာသင်နေဆဲ မဟုတ်ပါ
၂၅ စစ်ကိုင်း၊ ဓမ္မမေတ္တာဆရာတော်
၂၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၂၆ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ပါရမီထိပ်၊ ဓမ္မမေတ္တာကျောင်း ဆရာတော် ဥူးဝိမလ 54
၂၄-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသည်
၂၇ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ပါရမီရပ်၊ ဓမ္မမေတ္တာကျောင်းမှ ဆရာတော်ဦးဝိမ 54 ၂၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ ဟုတ်ပါသည်
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ကလေးမြို့နယ်၊ မြို့သာရပ်ကွက် သာသနဂုဏ်ရည် ကျောင်းတိုက် နဲ့ သဒ္ဓမ္မဇောတိပါလကျောင်းတိုက်များ​၏ ဦးစီး ပဓာန နာယက သက်တော်ရှည် မြို့သာဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးနရိန္ဒ
၂၄-၇-၂၀၂၁ နေ့၊ နေ့လည် ၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ဂွေးတောက်တောအုပ်စု၊ လယ်ရင်းတဲရွာ၊ သဒ္ဓမ္မကာရီ ရွာဦးကျောင်း၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော် အရှင် အဂ္ဂသာမိ
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၈း၃၀ တွင် ပျံလွန်တော်မူ
ပထမကြီးတန်း နှင့ ဝိနယဝိဒူ ဘွဲ့ ရရှိ မသိပါ
၃၀ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ လက်လှုပ်ရွာ ဥယျာဉ်ကျောင်း ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနန္ဒဝံသ
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၉း၄၅ အချိန်တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းရွာ၊ လေးထပ်ကျောင်း၊ ဆဋ္ဌမမြောက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏဝံသ (ရွှေပြည်ဟိန်းဆရာတော်၏ ဘဒွေးတော်)
၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၉-နာရီ မိနစ်(၂၀)အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့ ကူးကာမူလပဓါနပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှ ဆရာတော် ဦးဓမ္မိဿရ (ဦးသီဘွား)
53 33 ၂၆-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ ပထမကြီး မသိပါ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ မော်လူးမြို့ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ၏ နာယကဆရာတော်ဖြစ်သော မော်လူးမြို့၊ မင်းသီရိရပ်ကွက် (မင်းသာ) မင်းသာကျောင်းဆရာတော် ဦးသုမန
၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၉ : ၁၅) နာရီအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၃၄ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်း-မင်းကွန်းကားလမ်း၊ ရှစ်မျက်နှာကျောင်းတိုက်၊ ရှစ်မျက်နှာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရေဝတ 80 60
၂၇-၇-၂၀၂၁ ညနေ ၆:၃၀ တွင် အောက်စီဂျင်ထိုးကျပြီး ပျံလွန်တော်မူ
၃၅ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အုန္နဲ့ပင် ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိ
၂၈-၇-၂၀၂၁ ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၃၆ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဆိပ်ခွန်ကျေးရွာ၊ အင်ကြင်းပင်ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလ 71 51
၂၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် အောက်စီဂျင်ကျပြီး ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၃၇ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဝင်းစည်ရွာ၊ သာသနဇောတိကာရာမကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍဝံသ
၂၉-၇-၂၀၂၁ ရက်ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၃၈ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ လက်လှုပ်ရွာ၊ လက်လှုပ်တောင်ကျောင်းမှ ဦးကောဝိဒ
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၃၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ လက်လှုပ်ရွာ၊ ဥယျာဉ်ကျောင်းမှ
၄၀ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့၊ လေးထပ်ကြီးကျောင်းတိုက်၊ ဘဒ္ဒန္တဝေဒိတ 84 64 ၃၀.၇.၂၀၂၁၊ နံနက် ၁၀:၅၅ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၊ ဥက္ကဌဆရာတော် ဟုတ်ပါသည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့၊ လေးထပ်ကြီးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယက၊ မြို့နယ်သံဃနာယက ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၄၂ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ လက်လှုပ်ရွာ၊ ဥယျာဉ်ကျောင်းမှ ဦးဩသဓ
၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက်ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၄၃ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ပလိုင်းရွာ၊ ပလိုင်းကျောင်းကြီးမှ ဆရာတော် ဦးဝေရောစန ( ရွှေဘို ဘုန်းဝေ )
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မုံရွာမြို့နယ်၊မြေနဲကျေးရွာ ပဓာနိကာရုံကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးဣဿရိယ(ခ)ဦးဇင်းဘုတ်ဘုတ် (ရွှေဝါရောင် နိုင်ကျဉ်းဟောင်း)
၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၇း၁၅ နာရီ အချိန်တွင် မုံရွာဆေးရုံတွင်ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ရွာဗုကြီးကျေးရွာ၊ မဟာဝိဟာရကျောင်းကြီးတိုက်၏ဦးဏီးပဓာနနာယက၊ မုံတိုင်ပင်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်၊ ဘဒ္ဒ န္တကဝိန္ဒာစာရ
၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၁၁း၃၂ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့ အမှတ်၂ ရပ်ကွက် ဓမ္မိကာရာမ ကျောင်းတိုက် ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီး ဦးသြဘာသ
၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် 11:30မိနစ်အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၄၇ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ရွာဗုကြီးကျေးရွာ၊ မုံတိုင်ပင်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒကဝိန္ဒာစာရ 83 63
၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ် ၊ ယုံသာကျေးရွာ၊ သာသနာ့အလင်းရောင်ကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက၊ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်၊ ဘဒ္ဒန္တသြဘာသ
၃-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်(၅)နာရီ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာမြို့နယ်၊ အင်းကြီးအုပ်စု၊ အထက်လှေဘိုဆရာတော်၊ အောင်သိဒ္ဓိသန္တိသုခဓမ္မစကူးလ်၏ ဦးစီးပဓာန၊ ကသာမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီနာယက၊ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တမ
၃-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၈ အချိန်တွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဟုမ္မလင်းမြို့ မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီကြီး၏ သြဝါဒါစရိယ အထက်အော်သော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ အဂ္ဂဝံသ
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည၇နာရီအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၅၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ကြိုးကြာကျေးရွာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဥူးစာရိတ္တ 57
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၄၀ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးရုံတွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ ပုလဲမြို့နယ်ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ၊ ဇီးဖြူကုန်းရွာ၊ မြတ်ဇီးဖြူဓမ္မစကူးလ်​၏ ဦးဆောင်ဆရာတော်ဖြစ်သော ဘဒ္ဒန္တကုသလ
၄-၈-၂၀၂၁ နေ့တွင် ပျ့လွန်တော်မူ
၅၃ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို၊ ရွာပုလဲကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနေမိန္ဒ 65 45
၅-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၁၁နာရီ ၂၂မိနစ်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာမြို့နယ်၊ ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ၊ ရန်အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက် ပဓာန နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိစက္ခဏ
၆-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ တမာပင်ခွအုပ်စု၊ မင်းကံတိုက်ကျေးရွာ၊ ရပ်တော်မူကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးကုမုဒ
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ပုလိုင်းရွာ အဘယသုခကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝေရောစန (စာရေးဆရာ ရွှေဘို ဘုန်းဝေ)
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၁၂ နာရီ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၅၇ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ခင်ဦးမြို့၊ လေသာကျောင်းတိုက်ဆရာတော် အရှင်ပညာနန္ဒ 53 32
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၆:၀၀)အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ထနောင်းဝန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေနွားကုတ်ရွာ၊ နံ့သာကုန်းကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တ ဦးအာစိဏ္ဏ
၈-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂း၃၀ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၅၉ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့၊ ကန်ဖျားမြေနီလမ်း၊ ထန်းလေးပင်ကျောင်းတိုက်၊ ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တနန္ဒောဘာသ
၃-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တောမူ
၆၀ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ ဂျလန်းကျွန်းရှိ ဆလုံ မွန်ကင်းရွာမှာ သာသနာတော်ပြုနေသော ဂျလန်ကျွန်းဆရာတော် အရှင်ကုသလဇောတိ 45 25
၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှာ ကိုဗစ်ရောဂါစဖြစ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ သာစည်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီခွဲက ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနဲ့ ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ B.Sc (Zoology), ဆလုံသာသနာပြု နယ်လှဲ့ဓမ္မကထိက၊ ဟုတ်ပါသည်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊, ကောသောင်းမြိူ့ အောင်ဆုပန် မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်ကြီး ၏ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိ
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၆၂ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့ အေးရိပ်ငြိမ်ကျောင်းတိုက်မှဆရာတော်ဦးဇနက 53 33
၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည၁၀ခန့် က ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူ
၆၃ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့၊ အေးရိပ်ငြိမ်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးဇနက 53 33
၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၉း၄၅ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ ဟုတ်ပါသည်
၆၄ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက် Amphoe Mae Saut, Tak, Thailand တွင် သီတင်းသုံးသော သစ္စာမြိုင် အရှင်တေဇ
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် တီဘီ ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၆၅ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်​ကောက်မြို့ ဧကချိုင်မှာ သီတင်းသုံးနေသော ဆရာ​တော် အရှင်ဉာဏဓဇ (ပညာပါရမီဆရာ​တော်) 45 25
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁နာရီ ခွဲ ခန့်က ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်​တော်မူ
ဝိနယတိဒူ၊ အဂ်ုတ္ထရဝိဒူ၊ B.A၊ M.A
ပညာပါရမီဋ္ဌာန၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဟုတ်ပါသည်
၆၆ နေပြည်တာ်၊ လယ်ဝေးမြိုနယ်၊ ရှမ်းစု မြောက်ဘက်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးကဝိနန္ဒ 32 12
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၇း၄၅ အချိန်တွင် ၉၆ပါးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ၊ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ မဟာဝိသုတာရာမ ဈေးကုန်း ကျောင်းတိုက် ပဓာန နာယက၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဂဏမဟာဝိနာယက၊ သကျသီဟသာသနဟိတဂုဏဝိသိဋ္ဌ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကဝိသာရ
၁၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်လေယာဉ်ပျက်ကျ၍ ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ၊ သိရီပဝရဂုဏ်ထူး၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဂဏမဟာဝိနာယက၊
၆၈ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို၊ အောင်ကုသိုလ် တိုင်၁၀၀ ကျောင်းဆရာတော်
၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၁၁နာရီ၂၀ မိနစ်ချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ရန်အောင်(၁)ရပ်ကွက်၊ မဟာလယ်တီစံကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက၊ နေပြည်တော်သံဃနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် ဆရာတော်ကြီး အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာဝုဓ
၃-၈-၂၀၂၁ ရက် နံနက် (၁၀ : ၀၀)နာရီတိတိတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ စူဠဂန္တဝါစကပဏ္ဍတ ဟုတ်ပါသည်
၇၀ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ မဟာဝိသုတာရာမ ဈေးကုန်း ကျောင်းတိုက်မှဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ တေဇောဘာသ
၇၁ ပဲခူးမြို့၊ သာသနာ့လင်းရောင်ကြည်စာသင်တိုက်၊ တိုက်အုပ် ဆရာတော် ဦးသာသန
၅-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက်တွင် ပျံတော်မူ
၇၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့)၊ ကဝမြို့နယ်၊ ခမေကြီးကျေးရွာမှ ရွာဦးကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတ 84 64
၁၃-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပထမကြီးအောင်၊ ဓမ္မာစရိယတန်း ဟုတ်ပါသည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဂယာ၌တည်ရှိသော မဂဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်သော ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ် မှ အရှင်ဂန္ဓမာ
၁၄-၀၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံတော်မူ
၇၄ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့ ရွှေဘုံဆင့်ကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တဝိလာသ 87 67
၁၈.၇ ၂၀၂၁ စနေနေ့ည ၁၂ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၇၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ စစ်ကွင်းမြို့ ကံကျောင်းဆရာတော်
၁၉.၇.၂၀၂၁ နေ့တွင် စစ်ကွင်းမြု့ ဆေးရုံ၌ ပျံလွန်တော်မူ
၇၆ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာတွင် သီတင်းသုံးလျက်ရှိသော ဆရာတော် တစ်ပါး
၂၀-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့၊ ဇောတိကာရုံပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယ နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလာဘိဝံသ(ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလဇောတိ)
93 75 ၂၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၁၁း၃၀ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသည် ဟုတ်ပါသည်
၇၈ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ ပေါက်ကန်ရွာ ပေါက်ကန်ကျောင်းက အရှင်ဝဏ္ဏသီရိ
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံတော်မူ
၇၉ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ စိုင်တီးကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇဝန 62 42
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၃)နာရီ (၄၃)မိနစ်အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
စတုဘုမ္မိက မဟာသတိပဌာန် ငှက်တွင်းဂိုဏ်းကြီး၏ ဂဏာဓိပတိ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့၊ စတုဘုမ္မိကမဂ္ဂင် ကျောင်းတိုက်၊ ပဓာနနာယက နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ဗဟုဇနဟိတဓရ မဟာဓမ္မကထိက အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ စတုဘုမ္မိကဂဏာဓိပတိ သံတွဲဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ
၂၄-၇-၂၀၂၁ ရက်၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၁၅မိနစ်တွင်ပျံလွန်တော်မူ
ဂဏာဓိပတိ၊ မဟာဗဟုဇန ဟိတဓရ ဓမ္မကထိက၊ မဟာသဒ္ဓမ္မဇောဓိကဓဇ မသိပါ
၈၁ ပဲခူးမြို့၊ ရွှေမောဓောအရှေ့မုခ်၊ ရတနာမဥ္ဇူ သီလရှင် စာသင်တိုက်၏ စာချနာယက ဒေါ်ခေမာဝတီ 66 44
၂၄-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့ နန်းတော်ရာရပ် အင်းဝင်၁၁လမ်းအရှေ့ဘက် မြသပိတ် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓါန နာယကဆရာတော် မြို့နယ် ရပ်ကျေးသံဃနာယက ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃း၃၁ ခန့်တွင် ၉၆ပါးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့ နန်းတော်ရာရပ်၊ အင်းဝင်၁၁လမ်းအရှေ့ဘက်၊ မြသပိတ် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓါန နာယကဆရာတော် မြို့နယ် ရပ်ကျေးသံဃနာယက ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက် ညနေ ၃နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ၉၆ပါးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ဇောတိကရုံ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဦးမဟိန္ဒ)
၂၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် ဇီးကုန်းပြည်သူဆေးရုံကြီးတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ကျွဲပွဲမြို့ မြိုဦးမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတော်တွင်သီတင်းသုံးတော်မူသော ခန်းနေဦးဇင်း (ဦးဇောတိက)
၂၆.၇.၂၀၂၁နေ့. နံက်၃နာရီ၃၀မိနစ် တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၈၆ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ ကွင်းကျောင်းဆရာတော် ဦးဇာနိဿရ 80 60
၂၈-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
စာချ နှစ်ကျမ်းအောင် ဟုတ်ပါသည်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ငါးကြီးကွေ့ကျေးရွာ၊ ငါးကြီးကွေ့ကျောင်းတိုက် ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ
၂၈-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် နံနက် ၁၀နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ မဟုတ်ပါ
၈၈ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့၊ ဇီးဖြူပင်သာသနရိပ်သာကျောင်း ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိစ္စ
၂၈-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်သံဃနာယကအကျိုးတော်ဆောင်၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် သာယာဝတီခရိုင် ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီများ၏ နာယက၊ ​ ရွှေဘိုတန်းကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဓန္တပဏ္ဍိတ
၂၈-၇-၂၀၂၁ နေ့၊ နေ့တွင် (၉၆) ပါးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊၊ ကဝမြို့၊ ကွင်းကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်၊ မြို့နယ်ပထမပြန်စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှုး၊ ဘဒ္ဒန္တဇာနိဿရ
၂၈-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးမြို့၊ သုဒဿနလမ်း၊ ဝေဇယန္တာကျောင်းတိုက် ကျေးဇူးတော်ရှင် သက်တော်ရှည် ဝေဇယန္တာဆရာတော်ဘုရားကြီ ရွှေမောဓောစေတီတော် ဩဝါဒစရိယ၊ သံဃာ့ဆေးကုခန်းသြဝါဒစရိယ၊ အာဘိဓမ္မိကသီလရှင်ပရိယတ္တိ စာတော်ပြန်ပွဲသြဝါဒစရိယ၊ နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ ဘဒ္ဒန္တကုသလ မဟာထေရ်
၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၁၂နာရီအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့၊ မဟာငါးဆူကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တဂါရဝ
၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရိအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၉၃ ပဲခူးမြို့၊ သုဒဿနလမ်း , ရွှေမောဓောဘုရားအရှေ့ဘက်မုခ်အနီးမှ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုသလ 96 75 ၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည၁၂နာရီ တွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့၊ ဇောတိကာရုံပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက် စာချနာယက၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ ဘန္တဇောတိက
၂-၈-၂၀၂၁ ရက် နေ့ည ၂း၁၀ မိနစ်တွင် ဆီးချိုရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်သာကျေးရွာ၊ အမြန်လမ်း ၁၀၇ မိုင် ၃ဖာလုံကျောင်းတွင်သတင်းသုံးတော်မူသော၊ မြစိမ်းရောင် ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးဝိဇ္ဇာဟုခေါ်ဆိုကြသည့် မြစိမ်းရောင်ဆရာတော်
၉၆ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ အလယ်ကျောကျေးရွာမှ ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒြိယ 53 33
၇-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အဆုတ်အနာရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မြို့မလမ်းဘေး၊ အ ထ က ၂ ကျောင်းအရှေ့ဘက်၊ မင်္ဂလာပညာရာမ‌ကျောင်း မှ ဆရာတော်တစ်ပါး
၁၃-၇-၂၀၂၁ ညနေ၄နာရီခန့်တွင်ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၉၈ မကွေးတိုင်း ၊ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ ရေရှင်မရွာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ရတနာ့မာန်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ ပဏ္ဍိစ္စ
၁၄-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ ၄း၃၀ ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်
ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ကန်ဒေသဆိုင်ရာ ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ၏ ဩဝါဒါစရိယ မသိပါ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ ရေရှင်မကျေးရွာအုပ်စု၊ရတနာမာရ်အောင်ကျောင်းဦးစီးပဓာနနာယက ကန်ဒေသဓမ္မစကူးလ်၏ သြဝါဒစရိယ ဆရာတော်ဘုရားကြီး
၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည၇ နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးမြို့၊ မဟာဝိသုတာ ရာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက် နာယက(တိုက်အုပ်ဆရာတော်)၊ မကွေးမြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ မကွေးမြို့နယ် ပထမပြန်/ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တသာသန
၁၄-၇-၂၀၂၁ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ ဟုတ်ပါသည်
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါ်မြို့နယ် (ယောနယ်)၊ ကန်ဒေသဓမ္မစကူးလ်၏ နာယက၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် (ယောနယ်)၊ တောင်ယာပြင်ရွာ၊ ရတနာသီရိကျောင်းတိုက် (ရတနာသီရိဓမ္မစကူးလ်)ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသော ဘဒ္ဒန္တဂါမိက
၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ညနေ ၅း၃၀ ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၀၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ၊တောင်ယာပြင်ရွာ၊ .. တောင်ယာပြင်ဆရာတော်
၁၅-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်း၊ ဂန့်ဂေါ်မြို့နယ် (ယောနယ်)၊ ကန်ဒေသဓမ္မစကူးလ် နာယက၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် (ယောနယ်)၊ လက်ပန်ရွာ (ယော ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မေတ္တာဆေးခန်း) သြဝါဒစရိယ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် (ယောနယ်)၊ မောက်လင်းရွာ သာသနာ့ရက္ခိတ ကျောင်း (သာသနာ့ရက္ခိတဓမ္မစကူးလ်) ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော်ကြီး၊
၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ၂:၃၀. အချိန် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မောက်လင်းရွာ၊ သာသနရက္ခိတ ကျောင်းဆရာတော်၊ လက်ပန် မေတ္တာဆေးခန်း ဩဝါဒါစရိယ၊ ကန်ဒေသဓမ္မစကူးလ်ရဲ့ ဦးဆောင် ၊ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍတ (မောက်လင်းဆရာတော်)
၁၆-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နတ်မောက်မြို့ ;ဘုရားသုံးဆူကျောင်းတိုက်၏ပဓာနနာယက၊ ဒီပင်္ကရာစာသင်တိုက်၏နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မ
၁၇-၇-၂၀၂၁ နေ့ ၁၂-နာရီ ၂၅-မိနစ်အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊ မြင်သားကျေးရွာ မြင်းသားတောရလိုက်ဗရာရီ ပါဠိသိပ္ပံ ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးစန္ဒဝံသ
61 21 ၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသည်။ ဟုတ်ပါသည်
၁၀၇ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်အတွင်းရှိ တောင်ခင်ရန်း- သာလင်း- မြင်သားကျေးရွာ၊ မြင်သား တောရ ကျောင်း၊ ဘဒ္ဒန္တ စန္ဓဝံသ 61 42 ၁၉-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ ၃ နာရီ တိတိ အချိန်တွင် တိုင်းသံဃနာယက ဗဟိုဝန်ဆောင် မသိပါ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်ဘူး(စကု)မြို့နယ်l မယ်ဘေ့ကုန်းကျေးရွာ၊ အောင်တော်မှုဓာတ်ကျောင်းl စနေသားဆရာတော် ဦးတိ​လောကိန္ဒ
၁၉-၇-၂၀၂၁ နေ့ ည(၇း၅၀)နာရီ းတွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၀၉ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ပျားရွာ၊ ပျားရိပ်သာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတာ် ဦးပညာသီဟ 67 47
၂၁-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက်(၇)နာရီအချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူ
ပခုက္ကူပညာရေးစနစ် ကျမ်ကြီးပေါက် မသိပါ
၁၁၀ မကွေးမြို့ ဓမ္မဂုဏ်ရည် ပုညဝတီ ဆရာတော်
၂၃-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက် ၄ နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးမြို့၊ မဲထီးလမ်း၊ ဈေးလယ်စိုးရပ်၊ ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည် ပုညဝတီ မိုးကုတ်ဓမ္မရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့၊ လှော်ကားရွာမပိုင်း၊ ဓမ္မဂုဏ်ရည် ပုညဝတီ မိုးကုတ်ဓမ္မရိပ်သာ၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောပိတ စံပြကျေးရွာ၊ သံဃာ့ဂုဏ်ရည် ပုညဝတီ မိုးကုတ်ဓမ္မရိပ်သာ၊ ကျောင်းတိုက်ကြီးများ၏ ဦးစီးပဓာန နာယကချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တဇဋိလ
၂၃-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက် ၄နာရီအချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ကမ္မဋ္ဌါနာစရိယ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ၊ မူလဓမ္မာစရိယ ဟုတ်ပါသည်
၁၁၂ မကွေးမြို့၊ သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းတိုက်၊ ယခင်(စာချ) တိုက်သစ်၊ ဘာဏကထွက် ဆရာတော် ဦးကောဏ္ဏည 55
၂၅-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ ၅.၃၀ မှာကိုဗစ်ရောဂဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၁၃ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူ မြို့နယ်၊ ဘဲကြီးအုပ်စု၊ အောင်သာကျေးရွာ၊ ကျောင်းဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတ 80
၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ ဇောင်းယားပင်ကျေးရွာ၊ အောင်ရတနာကျောင်း ဇောင်းယားပင်ဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသာလင်္ကာရ၊
၂၆-၇-၂၀၂၁ နေ့ မုံရွာ အလုံမြို့ တပ်မတော်ဆေးရုံကြီးတွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ တက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ (B.A Buddhism)
ပရိယတ္တိသာသနာလင်္ကာရသာမဏေကျော် ဝိနယဝိဒူဘွဲ့ရ မဟုတ်ပါ
၁၁၅ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် ၊ကံသစ်ရွာမြောက်ကျောင်းမှ ဆရာတော် ဉီးသုန်ဒရဗုဓ်ဒိ 45 25 ၂၆-၇-၂၀၂၁ နံနက် ၃ နာရီ တွင် ပျံလွန်တော်မူ ပထမ​ကြီးတန်း မသိပါ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ ဓမ္မိကာတောရစာသင်တိုက်နှင့် မြကင်းတောင်အေးရိပ်ငြိမ်တောရ၏ဦးစီးပဓါနဆရာတော် သာသနဓဇသိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တသာသန
၂၈-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက် ၁၁နာရီခွဲခန့် တွင် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇသိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မသိပါ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ထီးလင်းမြို့နယ်၊ တောမကျေးရွာ၊ ညောင်ဇဉ်ကံတော်တောရကျောင်းမှ ဆရာတော် ဥူးပုည၊
၂၉.၇.၂၀၂၁ ရက်နေ့၌ ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းတွင် စာချနေသော (ကလေးမြို့ မဟာသန္တာရုံကျောင်းကနေ ယခင်နှစ်ကမှ ပြောင်းရွှေ့သွားသော)စာချသက်တမ်း အနည်းဆုံး (၁၈) နှစ်ခန့်သည့် ဆရာတော် ဦးမဟာနန္ဒ
၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဆီချိုတက်ပြီး ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင် ဂန့်ဂေါမြို့ ကန်ဒေသဓမ္မစကူးလ် ဒုတိယဥက္ကဌ ကန်ရွာအနောက်ကျောင်း ဒုတိယ နာယက။ ကလေးမြို့ ဗောဓိရတနာကျောက်ဂူရိပ်သာ နှင့် ကလေးမြို့ ဗောဓိရတနာ ကျောက်ဂူရိပ်သာ တို့၏ ပဓာန နာယကဆရာတော် အရှင်သီလာနန္ဒ
၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံက် ၄း၃၀ အချိန် တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ကန်ရွာ၊ ပစ္ဆိမာရုံအောင်ရတနာကျောင်းတိုက်၏ ဒုတိယနာယကဆရာတော် ၊ ကလေးမြို့ ဗောဓိရတနာရိပ်သာ ဆရာတော်၊ ကန်ဒေသဓမ္မစကူးလ် ဒုဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်၊ ပစ္ဆိမာရုံဓမ္မစကူးလ် သြဝါဒဆရာတော်၊ ဘဒ္ဒန္တသိလာနန္ဒ
၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံက် ၄း၃၀ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၂၁ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ ပွင့်ဖြူမြို့၊ ရွှေစေတီပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ ဦးစီးပဓာနနာယက၊
၃-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၂၂ မကွေးတိုင်း ချောက်မြို့နယ် ကြို့ပင်စံပြကျေးရွာဖွား ချောက်မြို့ အနောက်ငွေတောင်တိုက် မဟာနာယက ဆရာကြီး
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်မှ ဂူဖြူတောရမူလရွှေကျင်ကျောင်းတိုက် ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော် ဘုရားကြီးဘဒ္ဒန္တနန္ဒောဘာသ
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေတွင် အောက်စီဂျင်ကျ ပျံလွန်တော်မူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် သနပ္ပင်စုကျေးရွာအုပ်စု ငွေသောင်ကျေးရွာ ဓမ္မောဒယကျောင်းဆရာတော် ဦးဣန္ဒာစာရ
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသည်။
၁၂၅ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့ မျိုးမြန်မာရပ် မင်္ဂလာပညာရာမကျောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒဝံသ 61 41
၁၃-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၂၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည် ငါးမြွေကုန်းရွာ ဘဒ္ဒန္တဥက္ကဋ္ဌ
၆-၇-၂၀၂၁ နေ့ ည ၈ နာရီတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ သံလျှက်မှော်အရှေ့ ပတ္တာသပြေညွန့်ရပ်၊ သီရိမင်္ဂလာကျောင်းတိုက်တွင် ၃၄နှစ်တိုင်တိုင် သာသနာဝန်ဆောင်ခဲ့သော ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက
၇-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ၉၆ပါး ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၂၈ မန္တလေးမြို့၊ အသောကရာမတိုက် ၊ကံသာညောင်စာရေးကျောင်း၊ စာချတန်းမှ အရှင်ခေမာဝံသ 35
၈-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက် ၈နာရီ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြိုနယ်၊ သီရိမာလာအနောက်၊ ချမ်းသာကြီးဘုရားဝန်း၏ မြောက်ဘက်၊ သာသနဇောတိကအုဉ်ကျောင်း၊ ချမ်းသာသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်းကြီး၏ ပဓာန နာယက ဆရာတော်၊ ဘဒ္ဒန္တ ဥူးက္ကုန္ဒက
၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံက် ၈ နာရီ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၃၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမှ သက်တော်ရ ဆရာတော်တပါး
၁၁-၇-၂၀၂၁ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မိုးကုတ်မြို့၊ အုပ်အင်းရပ်၊ ဓမ္မာနန္ဒ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးပညာသာမိ၊ ကလောင်ရှင် နေရသူ(အတွေး)
၁၃-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၁၀နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၉)၊ ရွာထောင်ရွာ၊ တဝဂူတောရကျောင်း စတင်တည်ထောင်မူသော ရွာထောင်ဆရာတော်ကြီး ဦးကုသလဓဇ
၁၃-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ပျံတော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊ အမရပူရမြို့၊ ရွှေအိုးရ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ ဦးစီးပဓာန နာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ကောသလ္လ
၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆:၅၅မိနစ် အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၃၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ ကိုးဆောင်တိုက် ပခုက္ကူကျောင်းသစ်အုပ်စု၏ ပဓာန နာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍဝ
၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၃၅ မန္တလေးမြို့၊ ၁၇ နဲ့ ၈၇ လမ်းထောင့်၊ နိသျည်းကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ
၁၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၃၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ ငါန်းမြာကျေးရွာ၊ ငါန်းမြာကြီး လယ်တီကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီး 92 72
၂၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၂နာရီ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၃၇ စကုတိုက် မှန်နန်းတိုက်ကျောင်း ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုသလ
၂၂-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကိုဗစ်‌ေရောဂါဖြင့် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ
၁၃၈ မန္တလေး၊ မြင်းဝန်မင်းကြီးကျောင်းတိုက်၊ ပုပ္ပါးကျောင်းဆရာတော် ဦးသီလာစာရ ၂၂=၇-၂၀၂၁ မသိပါ
၁၃၉ မန္တလေးတိုင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ လောကမဏိစူဠာပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ပဓာနနာယကဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိန္ဒ 82 61 ၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ မူလဓမ္မာစရိယ
ဖြူး မဟာစည် ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဟုတ်ပါသည်
၁၄၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ဒါးကျွန်းမြောက်ရွာ၊ ဆရာတော် ဦးပုည 52
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရ၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်ကြီးမှ ဆရာတော် ဦး ပညိန္ဒ (မိုးကုတ်သိမ် မော်ကျွန်းကျောင်း)
၂၂-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၄၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊အမရပူရ၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ မှ အရှင်ပညိန္ဒ 53 33 ၂၂-၆-၂၀၂၁ ရက် နေ့လည် ၂:၂၅ နာရီ တွင် ကိုဗစ်ရာဂါဖြင့် ပျံတော်မူ ဟုတ်ပါသည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံမြို့နယ် ခေါင်းကွဲကျေးရွာ ပရိယတ္တိတိုက်ကျောင်း၏ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တပညာဝံသ
၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၄၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မိုကုတ်မြို့၊ အောင်မြေကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (ဘုန်းကြီးဦးစန်းမောင်)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ သံရွာအုပ်စု၊ လွှဲရွာ၊ ရွာဦးကျောင်းတိုက်၏ ဦးစီးနာယက ပဓာန ဆရာတော် ဦးကုမုဒြ
၂၈-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၆း၅၅ နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ သီရိမာလာအနောက်၊ ဥသျှစ်ကုန်းကျောင်းတိုက်၊ ရွှေညောင်ပင်ကျောင်း လက်ထောက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာနန္ဒ
၂၈-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက်၅နာရီတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၄၇ မန္တလေတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဧပြကျေးရွာ သစ္ဆိမ့်ကျောင်း ပဓာနနာယကဆရာတော် ဦးဥတ္တမ
၁၄၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ဖောင်ချဉ်းတောင်ရွာကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဥက္ကံသ
၂၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ မြတောင်ကျောင်းတိုက်၊ ပဓာနနာယက ဆရာတော်ဘုရား ဘဒ္ဒန္တပညာသိရီဘိဝံသ (ရွှေဝါဝင်းကျောင်း)
၂၉-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ ၅း၃၀ တွင် စကစမှ ကျောင်းဝင်းထဲသို့ ဝင်းရောက်စီးနင်းရှာဖွေစဉ် အောက်စီဂျင်ကျကာ ကိုဗစ်ရောဂါဖြင် ပျံလွန်တော်မူ
သကျသီဟဓမ္မာစရိယ၊ သုဓမ္မာစာရဓမ္မာစရိယ၊ သဒ္ဓမ္မပါလဓမ္မာစရိယ၊ အစိုးရ ဓမ္မာစရိယ၊ စေတီယင်္ဂဏဓမ္မာစရိယ ဟုတ်ပါသည်
မန္တလေးတိုင်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ် သရက်တောဝါးတန်းကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူသော ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍဝ (လူသစ်-ဗန်းမော်
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့နံနက် ၉နာရီဝန်းကျင်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီး ဆေးရုံမှာ ကိုဗစ် ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံ တက်ရောက် ကုသနေတဲ့ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဇောတိပါလ
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါြဖင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၅၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့ ဗောဓိစင်္ကြာကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဗုဒ္ဓရက္ခိတ 94 74
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်‌ေတာ်မူ
မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ တံခွန်တိုင်တမာတန်းရပ်ကွက် မိုးထိ အောင်စည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ အမရပူရမြို့နယ် ညောင်ပင်စောက်ကျေးရွာ မိုးထိအောင်စည်တောရသာသနာ့ ရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်မြို့ ပုလဲမြို့သစ် မိုးထိတောရ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ညံညင်းသာကျေးရွာ မိုးထိအောင်စည် တောင် ပေါ်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ နောင်ချိုမြို့နယ် ဘန့်ကြီးတောင် မိုးထိအောင်စည်သာသနာ့ရိပ်သာကြီးများ၏ ဦးစီးပဓာန မဟာနာယက၊ ပရိယတ္တိသာသနပါလအသင်းကြီး(မန္တလေး)၊အဘိလင်္ကာရရဟန်းကျော်စာမေးပွဲပင်မပစ္စယာနုဂ္ဂဟဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တိယ မဟာထေရ်၊
၃၀-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက်(၂း၃၆)နာရီတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပံလွန်တော်မူ
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းသာကြီးမြောက်တိုက်၊ သုဓမ္မဝတီကျောင်း တိုက်အုပ် ဆရာတော်၊ ချမ်းသာသုခအသင်းကြီး၏ သြဝါဒါ စရိယ၊ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဦးပညိန္ဒ
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃း၁၀ အချိန်တွင် အချိန်၉၆ ပါးသောရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၅၅ မန္တလေးမြို့၊ မဂ်လာဇေယျုံကျောင်း၏ ဦစီးပဓာဏ နာယက အရှင်ခန္ဒီဝရ 50
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂း၃၀ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနာ့ဓဇ ဓမ္မစရိယ ဟုတ်ပါသည်
၁၅၆ မန္တလေးမြို့၊ ရတနာပုဂံတိုက် စိန်ရွှေရတနာကျောင်း၏ ပဓာနနာယကဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ 87 67
၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ် အချိန် တွင် ပျံလွန်တော်
ဓမ္မကထိက ဗဟု ဇနဟိတဓရ မသိပါ
၁၅၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ ခင်မကန်တိုက်မှ ဆရာတော် ဦးဉေယျ
၁၅၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘိုတက်ကုန်းရွာကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးပညိဿရ 38 18
၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (၁ )နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၅၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့၊ အောင်မြေကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ဦးဉာဏောဘာသ 76 25
၁၆၀ မန္တလေးမြို့၊ ဇေယျာဘုံမြင့်ကျောင်းတိုက်(တမာတန်းကျောင်းတိုက်) ဆရာတော် အရှင်ကုမာရ 45 26
၁-၈-၂၀၂၁ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၆၁ မန္တလေးမြို့၊ အဘယာရာမရွှေဂူပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ စန္ဒောဘာသ 86 66
၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၈း၃၀)နာရီ၊ အချိန်၌ ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်း၊ မလှိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မင်းကျောင်း ကျောင်းတိုက်၊ မြို့နယ်သံဃနာယက ဥက္ကဌဆရာ‌တော် ဦးမာယိန္ဒ
၂-၈-၂၀၂၁ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် မလှိုင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်လွန်တော်မူ
၁၆၃ မန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်ရွှေပေါ်ကျွန်းမြသဘက်ကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးဇဋိလ 59 35 ၂-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက်၄နာရီမိနှစ်၂၀ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ မရှိ ဟုတ်ပါသည်
၁၆၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ စကျင်ရွာ၊ မဟာသိမ် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာဇောတိ
၅-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၅း၃၀ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၆၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ စကျင်ကျေးရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏဇောတိ 61 41
၅-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၆၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊ ခင်မကန်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးလာဘသိဒ္ဓိ
၅-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၁၁း၂၀ အချိန်တွင်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊မြို့လှကျေးရွာ၊ မြို့လှ​​ မြောက်ကျောင်း တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဖြစ်တော်မူသော ဘဒ္ဒန္တ စန္ဒရ၊
၅-၈-၂၀၂၁ နေ့လည်(၁)နာရိအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရ၊ မဟာဂန္ဓာရုံ ဂန္ဓကုဋီ ဦးဘသိန်းကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးသော ဆရာကြီး ဦးသောဘိတ (ချိုင်းကြီး)
၆-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည (၁)နာရီက မုံရွာဆေးရုံတွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၆၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ ဂန္ဓကုဋိ ဦးဘသိန်းကျောင်းမှ ဦးသောဘိတ (ချိုင်းကြီး) 36
၆-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၁)နာရီတွင် မုံရွာဆေးရုံတွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၇၀ မန္တလေးမြို့ ရတနာပုဂံတိုက် စိန်ရွှေရတနကျောင်း၏ ဒုတိယပဓာန နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုစာရိန္ဒ (ဘိုးနိုင်) 84 64
၆-၈-၂၀၂၁ ရက် နံနက် ၄ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၇၁ မန္တလေးတိုင်း မတ္တရာမြို့နယ်၊ လက္ကောင်းလေးရွာ၊ အောင်သာကျောင်းတိုက်၊ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇာတ မဟာထေရ် 86 66
၇-၈-၂၉၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၂၀ မိနစ်တွင် ၉၆ပါး ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ပြင်စည်ကျေးရွာ၊ ရွှေမုဌောကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ မေဒါနန္ဒ
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီအချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ပြရာချောင်းအုပ်စု၊ မကျီးရိုး+သာမာန်ရွာ၊ ရွှေဘုံသာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏေ္ဏာဘာသ
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်(12:30)AM အချိန်ခန့်က ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၇၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ သိရီနန္ဒာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုနန္ဒ 69 49
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂း၅၀ တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင်၊ မန္တလေးမြို့ ၊ဘုရားကြီး အရှေ့မုခ်၊မဟာနန္ဒိသေနာရာမတိုက် ပဓာန မဟာနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသ
၈-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့နံနက်(၂)နာရီအချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
ပါဠိပါရဂူ၊ သာသနဓဇသိရီပဝရဓမ္မာရိယ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂု၊ နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင် မသိပါ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ မင်းကျောင်းတိုက်၊ သာသနာ့ရက္ခိတကျောင်းဆရာတော်၊ တိပိဋက ဥဘတောဝိဘင်္ဂဓရ မြင်းခြံသာမဏေကျော်ပုစ္ဆကစာစစ်အဖွဲ့ဝင်အကျိုးတော်ဆောင်၊ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇာတ
၈-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၇၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ရွာစည်မြောက်ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကေသရ 78 58
၈-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံက် 00:15 အချိန်၌ ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့၊ ညွန့်ပင်ကျေးရွာ၊ မဟာသန္တိသုခသဒ္ဓမ္မဝံသကျောင်း ဦးစီးပဓာန နာယက၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ သုန္ဒရ
၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ပထမပြန်ပညာရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့၊ ကော့စွယ်ပရိယတ္တိအရှေ့ကျောင်းမှ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ
ကမ္ဘာအေးတွင် စာစစ်ဆရာတော်အဖြစ် ပညာရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကိုဗစ်အကူးခံရပြီး အင်းလျားစင်တာမှာ ၁၈-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၈၀ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့၊ ကော့စွယ်ပရိယတ္တိအရှေ့ကျောင်း၊ နိုင်ငံတော်ပထမပြန်ပညာရေးဗဟိုအဖွဲ့ စာစစ်၊
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ ၁၈-၇-၂၀၂၁ နေ့ ညနေ ၅ - နာရီ နိုင်ငံတော်ပထမပြန်ပညာရေးဗဟိုအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော် ဟုတ်ပါသည်
၁၈၁ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ အောက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ ဓမ္မမေဒနီစာသင်တိုက်မှ စာချဆရာတော် ဦးပညာသီဟ 58 38
၂၂-၇-၂၀၂၁ နံနက် ၆း၃၀ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာဖြင့် အောက်စီဂျင်ကျ၍ ပျံလွန်တော်မူ
ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တန်းသာသနာ့ပြု ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ စောင်နိုင်ဂွကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း(မူလွန်)၏ ကျောင်းအုပ် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းလေးကျောင်းတိုက်၊ ကိုးနဝင်းကျောင်းတိုက်၊ ဝါးတောကျောင်းတိုက်၊ လွမ်းမြကျောင်းတိုက်၊ သီရိရတာနမာရ်အောင်ကျောင်းတိုက်၊ အေးငြိမ်းချမ်းသာဓမ္မသီတဂူကျောင်းတိုက်၊ ကပ်ကျော်ကျောင်းတိုက်၊ တောင်ရိပ်စံကျောင်းတိုက်၊ ဆောင်လှိုင်စွကျောင်းတိုက်၊ အစရှိသော ကျောင်းတိုက်တို့၏ ဦးစီးပဓာန နာယကချုပ်ဆရာတော် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တနန္ဒိယ မဟာထေရ်
၂၅-၇-၂၀၂၁ နေ့ မွန်းလွဲ ၁၂း၄၀ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၈၃ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ လေသာကျောင်း ဦးစီးပဓာန နာယက လေသာကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဌိတ
၂၆-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မသိပါ
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကော့စံနိုင်ရပ်ကွက်၊ လေသာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတ
၂၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီတွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၈၅ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ဩဝါဒါစရိယ၊ မြို့ကော့ဘိန်းကျောင်း ဆရာတော် ဦးကုဏ္ဍလ
၂၇-၇-၂၀၂၁ နေ့ နံနက် ၀၉း၄၅ အချိန်တွင် ပျံလါန်တော်မူ
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ လှိုင်ရပ်ကွက်၊ မြို့ရှောင်လမ်း၊ ဇောတိကာရုံစာသင်တိုက် ၏ ဦးစီးပဓာနနာယက၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်၊ မွန်ပြည်နယ် မြို့နယ်ပေါင်းစုံ ဓမ္မစကူးလ်ကော်မတီ ၏ သြဝါဒါစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ဘဒ္ဒန္တ စန္ဒောဘာသ၊
၂၇-၇-၂၀၂၁ နေ့တွင် (၉၆) ပါး ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ မဟုတ်ပါ
၁၈၇ ထီးမင်္ဂလာကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးပညာသာမိ
၂၉-၇-၂၀၂၁ ရက်မနက် ၈နာရီပျံလွန်တော်မူ
၁၈၈ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ဘီလူးကျွန်း၊ ကွမ်ဒိုင်းကျေးရွာ၊ စိတ္တရူပကျောင်းဆရာတော်
၂၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၈၉ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့၊ အောင်ကုသိုလ်ရပ် ( ဘာဇနူဓရ်)၊ ဇနူဓရ် ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး
၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ အောင်ကုသိုလ်ရပ်ကွက်၊ တိုင်(၁၀၀)ကျောင်း (ဇနူထောကျောင်း) ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပုပ္ဖယသ
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ပီယော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပီယော်ကျောင်း ပဓာန နာယကဆရာတော်၊ မွန်ပြ်ညနယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကင်မွန်းချုံကျောင်းကြီး ပဓာန နာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ
နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ မုကွဲပဝါရဏာဂိုဏ်း ဂိုဏ်းချုပ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ဘီလူးကျွန်း၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ် သံဃဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ပရိယတ္တိဟိတကာရီအဖွဲ့ကြီး၏ဥက္ကဋ္ဌ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကြီးရွာ၊ မြစေတီကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကေလာသ
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် ပျံလွန်တာ်မူ
၁၉၃ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့၊ ဘိန်းဗျောကျေးရွ၊ာ ဘိန်းဗျောကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် ဦးစန္ဒာဝရ 82 62
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၀၂:၄၅ အချိန်တွင် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
၁၉၄ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ရေးမြို့နယ်၊ အစင်ကျေးရွာ၊ ဓမ္မဒူတဝေဠုဝန်တောရကျောင်းဆရာတော်ဘဒ္ဒတ္တဝဏ္ဏိတ 90 71
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ အစင်စံပြကျေးရွာ၊(သာသနဓဇ သီရိပရဝ ဓမ္မာစရိယ တိပိဋက ဒီဃဘဏက)ဓမ္မဒူတဝေဠုဝန်တောရကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဝဏ္ဏိတ (ဝိနည်းမှတ်စုကျမ်းပြုဆရာတော်)
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
သာသနဓဇ သီရိပရဝ ဓမ္မာစရိယ တိပိဋက ဒီဃဘဏက မသိပါ
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ ကျိုက္ကော်၊ ကမာစိုင်ကျေးရွာ ရွှေညောင်ပင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးသုဇာတ
၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆း၅၆ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူ
၁၉၇ မွန်ပြည်နယ်၊သထုံမြို့နယ်၊ကမာစိုင်ရွာမှ ဆရာတော် ဦးသုဇာတ 45 25 ၇-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူ